Ingaba kunjalo ukuba kukho i-HTTPS kunye ne-SEO impembelelo kwii-rankings zakho?
Masithathe ngokungenanto-namhlanje, ngokuxhomekeka ngokukodwa kwi-HTTPS kunye ne-SEO nomthelela wonkcazo zonke zewebhu kwiluhlu lwamaphepha e-injini yosesho, ngokungabikho ukukhutshwa. Kukho izizathu ezanele zokutshintsha i-website esuka kwi-HTTP ukuya kwi-HTTPS, nje ngokuqwalasela umgangatho wehlabathi jikelele weyona ndlela ihamba phambili kunye nekhuselekileyo yomsebenzisi.Ukusuka kwimbono yokuqhuba ukwenza intengiso, umzekelo, isitolo sewebhu esine-intanethi, impembelelo ye-HTTPS kunye ne-SEO iyacaca ngokupheleleyo. Sifanele sijamelane nayo - kusoloko kulunge ukuba senze ngokufanelekileyo - house prices in seville spain. Kwaye i-modern reality ye-Web idinga ukuba senze konke okusemandleni ethu ukugcina yonke iprojekthi ephambili ye-intanethi phambi kweenguqulelo ezinjalo.
Ngaphezu koko, i-Google ngokwayo isandul. Kwaye mhlawumbi uye waphawula ukuba zonke iinkonzo ezixhaswe yi-giant search zibonelela ngokukhuselekileyo ngokuxhomekeka (njenge-Google Search ngokwayo, i-Gmail, i-Google Drayivu, njl.) U. Ewe, sibona ukuba iqela leGoogle isebenza ngoku ukwenza i-intanethi indawo ephephile yokukhangela, kunye nokukhuseleka kwemali, ngakumbi kunanini ngaphambili!
Ungathethi ukuba abadlali abakhulu kwiimarike ze-intanethi basoloko benza okusemandleni abo ukubonelela ngeemveliso ze-A-1 kuphela okanye iinkonzo. Enyanisweni, inqanaba elikhuseleyo lokukhuseleka ngeendlela ezikhuselekileyo ze-HTTPS iinkqubo sele sele zibe ngumgangatho oqhelekileyo wokuqhuba amashishini abo. Ndiyathetha ukuba abathengi abanamathuba amaninzi kwi-intanethi balindele ukujongana kuphela namaphepha ewebhu anika inqanaba elifanelekileyo lokhuseleko kunye ne-HTTPS. I-THey ilindele nje ukuba namava asebenzayo akhuselekanga ngokungagqibekanga, nje ukuweqa ezo ziqonga ezingapheliyo ziyafumaneka ngaphandle kwezitifiketi ze-SSL.
Usengabazekanga malunga ne-HTTPS kunye ne-SEO impembelelo kwi-website yakho yokukhuthazwa kwewebhusayithi kwiluhlu lwe-Google lwe-SERP? Unokufumana zonke iimpendulo kumaphepha aseburhulumenteni asemgangathweni yi-Google, eyenziwe ngokukodwa kulabo abangenakuqinisekiswa ngokufumana isigqibo sokugqibela sokusuka kwi-HTTP ukuya kwi-HTTPS. Esikhundleni sokukukholisa ngezinye izinto ezinokukhawuleza ekukhuthazweni kwikhompyutha, ezivela kwiimpembelelo ze-HTTPS ze-SEO, ndiya kuba nomboniso omfutshane wenkqubo yokutshintsha ukusuka kwi-HTTP ukuya kwi-HTTPS kwiwebhusayithi yakho.
Xa uphathwa ngokuchanekileyo (nangona ngokwakho), ukufumana iphepha lakho lewebhu elifudlulele kwi-HTTPS lingaba yinkqubo ecacileyo kwaye elula:
Yenza ukuthengwa kwesitifiketi sakho se-SSL
Dlulela kwinkqubo yokufakela isatifikethi usebenzisa i-akhawunti yokubamba yewebhusayithi yakho
Kubalulekile ukuba uhlolwe kabini kuzo zonke izixhumanisi zakho, njengoko ukufuduka kwakho kugqityiwe, yonke i-URL ngaphandle kokuhlaziywa ngokupheleleyo kwi-HTTPS Kuza kulahlekelwa ngonaphakade
Emva kwakho konke, ungakulibala ukuzisa iinjongo zokukhangela kwiwebhusayithi yakho. Makube no-301 ukulungiswa okumiselwe kwi-HTTPS, ukwenza wonke umsebenzisi abeke uphawu lwegama lakho kwiphepha lakho lewebhu ngokuzenzekelayo ukhokelwe kwizinto zakho ezitsha. Ekugqibeleni, ukuba unayo nayiphi na ingxaki nge-Google's Search Console, ndincoma ukudala iipropati ezizimeleyo ukuba zihlule i-HTTP kunye ne-HTTPS-based based pages ukukhusela loo myalezo kanye kunye.